October 13, 2020 - Padaethar
အချစ်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းများ…
October 13, 2020 by Padaethar
အချစ်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းများ… ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ အဖုအထစ်လေးတွေ များနေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့် အချစ်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်နေရတာလည်းဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ရအောင်။ အချစ်ရေး အဆင်မပြေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေက ဒီ အချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အရမ်းများနေတယ်… အချစ်ရေး အဆင်မပြေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ မပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးကလည်း အဓိကအချက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်သူတွေဆိုပေမယ့် လျို့ဝှက်ဖုံးကွယ် ထားတာတွေ များနေတဲ့အခါ… တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် သေချာမသိတဲ့အခါ သူစိမ်းနှစ်ယောက်လိုပဲ ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ တစ်ကယ်တော့ အချစ်ရေးဆိုတာ နွေးထွေးပွင့်လင်းမှုလေးတွေတော့ ရှိနေသင့်တာ မဟုတ်လား …၊ နားလည်မှုတွေ မပေးနိုင်ဘူး…. အချစ်ရေးတစ်ခု တည်မြဲဖို့ဆိုရင် ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ နားလည်မှုတွေ ရှိဖုိ့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက … Read more
ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ …သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ်
ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ် ( ၁ ) – သင့်လည်ချောင်းထဲမှာ ယားနေတယ်ဆိုရင် …. နားရွက် ကို ကုတ်လိုက်ပါ နားရွက်မှာ. ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကို လူံဆော်မိတဲ့ အခါအဲဒီ အာရုံကြောတွေဟာ လည်ချောင်းထဲက အာရုံကြောတွေကို အလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်စေပြီး ယားယံမူ ကို ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။ ( ၂ ) – လူတွေ ဆူညံ့နေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တယောက်ယောက်ရဲ့အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေလား.. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ညာဖက်နား ကို အသုံးပြုပါ ဂီတ သံစဉ်တွေ ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နား ကို အသုံးပြုပါ။ ( … Read more
ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် Project K အဖွဲ့ကို လေဆိပ်အနီး၌ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ(ရုပ်သံ)
သီချင်း ရုပ်သံဖိုင်၌ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ ပုံတော်ကို နင်း၍ ကပြဖျော်ဖြေခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် Project K အဖွဲ့ကို လေဆိပ်အနီး၌ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ Asia Song Festival 2020တွင်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် မြန်မာကေပေါ့ပ်တေးဂီတအဖွဲ့ Project K အဖွဲ့သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံရိပ်ကိုနင်းကာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည့်အတွက် လူမှုကွန်ရက်…. အသုံးပြုသူများအကြား အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံရပြီးနောက် … ဒီကနေ့ ညပိုင်း ၄င်းတို့အဖွဲ့ ပြည်တွင်းရောက်ရှိချိန်တွင် စောင့်ဆိုင်းပြစ်တင်ရှုတ်ချကြမည့် …. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူအင်အား(၃၀၀)ကျော်တို့သည် ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင်… သွားရောက်စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။credit unicode သီခငျြး ရုပျသံဖိုငျ၌ ရှတေိဂုံစတေီတျော၏ ပုံတျောကို နငျး၍ ကပွဖြျောဖွခေဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျကွောငျ့ ရနျကုနျလဆေိပျသို့ ရောကျရှိနသေညျ့ Project K … Read more
အိမ်ထောင်သည် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ
အိမ်ထောင်သည် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ အစ်မကြီး တစ်ယောက် ရဲ့ တောင်း ဆိုချက် အရ တင် လိုက်ပါပြီ… နောက် အိမ်ထောင် ပြု တဲ့ ဖခင် ၊မိခင်တိုင်း လိုလို အများစု ဘဝဇာတ်သိမ်း မကောင်းတတ်ကြပါဘူး . . .။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ ကို သနားပိုပြီး သားသမီး များ က ပိုပြီး ချစ်ကြ ပါတယ် . . .။ အသိစိတ်က အဖေ အမေ ဆိုပေမယ့် မသိစိတ်က ကြည်ညိုလို့ မရတဲ့ ဖခင်၊ မိခင် ဖြစ်နေတာပါ . . .။ အသိစိတ်က သွေးသား တော်စပ်ပေမယ့် … Read more
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
အိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ယခု ဖော်ပြမယ့် အချက် (၁၀) ချက်ကို လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူးနော် …။ (၁) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ အိပ်ခြင်း” အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အိပ်စက်သည့်အချိန်သည် သာမန်လူများ အိပ်စက်ချိန်ထက် ပို၍ တိုတောင်းသောကြောင့် သင့်ကို အိပ်ရေးပျက်စေပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွှေးများကလည်း သင်၏ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက် စေပါတယ်။ (၂) ရေနွေးပူ စိမ်ချိုးခြင်း” ရေနွေးပူစိမ်ချိုးခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ထို့အပြင် ရေနွေးပူကို (၁၀)မိနစ်လောက် ပို၍ ကြာကြာစိမ်ချိုးပါက သင်၏ သဘာဝအပေါ်ယံ အရေပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ (၃) စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း” အိပ်ရာမဝင်ခင် သတင်းကြည့်ခြင်း (သို့) တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်းက အိပ်စက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိုမျှမက အပျော်လွန်ကဲခြင်းသည်လည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ … Read more
Aသှေး Aသှေးလေးတှအေမြားစုဟာသနားစရာ၊ ခဈြစရာအလှနျကောငျးကွပါတယျ။ သူတို့တှဟောအပွငျပနျးမှာခကျထနျကွမျးတမျးတယျ ထငျရပမေယျ့ အတှငျးစိတျသဘောထားကတော့ အလှနျနူးညံ့သိမျမှပေ့ါတယျ? သူမြားကိုကူညီလိုကျလို့ကိုယျ့မှာသုညဖွဈသှား ခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့သူအဆငျပွနေတေယျဆိုရငျ ကွညျနူးပီတိဖွဈနတေတျတဲ့သူတှပေါ Aသှေးလေးတှဟော……… စတေနာလညျးအရမျးကောငျးသလိုသံယောဇဉျလညျးအလှနျကွီးကွတဲ့သူတှပေါ။ သူတို့ဟာစိတျဆိုးစိတျကောကျလညျးလှယျပါတယျ။ခဏခဏလညျးစိတျဆိုးစိတျကောကျတတျပါတယျ စိတျကောကျလညျးခဏပဲ။ ခြော့မယျ့သူရှိရငျတော့ဟနျအမူပိုပွီးဆကျပွီးတော့စိတျကောကျဟနျ…ဆောငျနတေတျပါတယျ။ခြော့မယျ့သူမရှိရငျတော့သူ့အလိုလိုပြော့သှားရော A သှေးလေးတှဟောခဈြသူအပျေါမှာလညျးကလေးတဈယောကျလိုဆိုးနှဲ့ခငျြကွပါတယျ။ အခဈြလညျးအရမျးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အခဈြစိတျကွီးတော့ဘယျလောကျကွီးတဲ့အပွဈဖွဈဖွဈစိတျရှညျသညျးခံပွီးနားလညျခှငျ့လှတျ ပေးနိုငျတဲ့သူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့စိတျထဲမှာတော့မတငျမကနြဲ့အမွဲသံသယဖွဈနတေတျတယျ။ ဖွဈခဲ့သမြှ အတိတျတှကေိုတော့ အမွဲမမဖြေ့ောကျနိုငျပဲ အမှတျကွီးတဲ့သူတှပေါ A သှေးလေးတှဟောအမြားအားဖွငျ့ကိုယျ့ ဘဝကို စိတျညဈစရာကောငျးတယျလို့ထငျနတေတျပါတယျ။သူမြားအကွညျ့တှကေိုလညျး သညျးမခံနိုငျသလို သူ့ကိုသူမြားတှကေစိတျထဲမှာ ဘယျလိုထငျနမေလဲဆိုတာကိုအမွဲသိခငျြနသေူတှပေါ။ Aသှေးလေးတှဟောကိုယျ့ကိုယျကိုလညျးမခဈြတတျဘူး။ …..သူမြားတကာတှကေိုလညျးတျောရုံတနျရုံအထငျမကွီးတတျဘူ A သှေးလေးတှဟောတဈခါတဈလကေိုယျ့ကိုယျကို…..တောငျo_O ယုံကွညျဖို့ခကျခဲနတေတျတယျ။ သူ့မှာအတှေးအချေါကောငျးတှရှေိနတောတောငျ… သူမြားစကားကိုယုံပွီးလကျခံတတျတဲ့အတှကျ အလုပျတဈခုကိုလုပျမယျဆိုရငျလညျးစဉျးစားနတောနဲ့ပဲအခနျြိကုနျသှားတတျတယျ။ -လုပျလိုကျတဲ့ကိစ်စတဈခုကို အမြားအားဖွငျ့ပွဿသ၁နာဖွဈမယျ ၊ဆုံးရှုံးမယျဆိုပွီးမကောငျးတဲ့ဘကျကပဲ အမြားအားဖွငျ့ တှေးလရှေိ့တယျ။ A သှေးလေးတှဟော ငွိမျးခမျြးခွငျးကိုမွတျနိုးသူတှပေါ။ ညဖွဈနိုငျရငျကိုယျတဈယောကျတညျးပဲ ငွိမျးခမျြးစှာသာသာယာယာနသှေားခငျြကွတဲ့သူတှပေါ။ ငွိမျးခမျြးရေးကိုမွတျနိုးပမေယျ့လညျး တောငျးပနျရမှာကိုတော့ သလေောကျအောငျမုနျးတယျ။သူအမှားတဈခုလုပျမိပွီဆိုရငျလညျးနောငျတရမဆုံးဖွဈနတေတျတာA သှေးလေးတှပေါ … Read more
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးမထားမခံရဘူး…
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့လူမျိုးတွေက ဘယ်တော့မှ တန်ဖိုးမထားမခံရဘူး… ချစ်သူအပေါ်အရမ်းသိတတ်လွန်းတဲ့သူတွေအားနာတတ်လွန်းတဲ့သူတွေ သိပ်ချစ်လွန်းတဲ့သူ …၊ အနစ်နာခံတတ်တဲ့သူ တွေမှာ အပင်ပန်းရဆုံး အချိန်က ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ပြုံးပြ ရတဲ့အချိန်ပဲ ကိုယ်နာကျင်နေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့သူကို ပြန်နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ …၊ ကိုယ်နာကျင်နေတာတောင် သူသိမှာစိုးလို့ ဟန်ဆောင်ပြုံးပြတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေ …၊ သိပ်အလိုက်သိ သိပ်ကို မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲ ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ ဘာဖြစ်နေတယ်တော့ ဘယ်သူမှ မသိစေရဘူး …။ နာကျင်လေလေ ရယ်စရာတွေပြော ဟာသတွေ လျောက်လုပ်နဲ့ ကိုယ်မပျော်တာတောင် သူများပျော်အောင် လုပ်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးတွေ …။ I’m okay ဆိုတဲ့ စကားကို အမြဲပြောတတ်ပေမယ့် အမြဲပြုံးနေတတ်ပေမယ့် …၊ သူတို့ကတစ်ကယ်တော့ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ် အရမ်းနာကျင်ရပါတယ် …။ တစ်ခါလောက်လေးတော့ … Read more